Kuteedzera kwevatengi muecommerce | ECommerce nhau
Rimwe zuva, ndakaisa magirazi angu ezuva ndokuwana pakakwenya kwakashata pama lens. Sezvo raive zuva reChishanu, ndakafunga kuti chaive chiratidzo kutenga maviri matsva. Ndichifunga kuti zvaizodhura kutenga pamhepo, ndakaenda kuAmazon ndokunotenga mapepa emhando yepamusoro ndichigadzirira rwendo rwangu rwunotevera rwemugwagwa.
Iwe unogona kunge uchienderana nenyaya iyi. Kana zvisiri, iwe ndiwe wega muvatengi gumi usingatarise mutengo wezvinhu paAmazon usati waita kutenga. Isu vamwe tinovimba nemitengo yesaiti yemitengo uye yakavimbika sevhisi kutungamira edu ekutenga zvisarudzo. Nekuda kweichi chinorwadza chiitiko chevatengi, isu takasarudza Amazon seyedu inodiwa e-commerce saiti nekutadza.
Amazon yakagadzira modhi yebasa inoenderana nezvinodiwa nevatengi vayo e-commerce - semuenzaniso, pamwe wakataura nemumiriri weAmazon kutsigira parunhare kana mukutaurirana kwepamhepo.
1 Basa revatengi mu e-commerce
2 Mipiro mukushandiswa kweshumiro iyi
3 Ecommerce Vatengi Sevhisi Yakanakisa Maitiro
4 Shandisa pasocial media kune vatengi
5 Sanganisira sarudzo dzekuzvishandira dzevatengi
6 Tora mukana wezvishandiso zvevatengi
7 Kusvika kwetekinoroji nyowani
8 Gadzira omni chiteshi zano
9 Ipa inotsigira vatengi
Muchikamu chino, isu ticha tsanangura kuti e-commerce sevhisi sevhisi chii uye nekukupa iwe imwe yeakanakisa maitiro iwe aunogona kushandisa kuigadziridza pane yako webhusaiti. Ipapo isu tinopa rondedzero yeecommerce sevhisi maturusi aunogona kutora kune rako bhizinesi.
E-commerce vatengi vatengi inoreva masevhisi ayo anopihwa kune vatengi vepamhepo. Kana vashanyi vako vaine mibvunzo kana vachida rubatsiro mukutenga, izvi maficha anovabatsira kufamba saiti yako uye kuzadzisa zvinangwa zvavo. E-commerce sevhisi sevhisi inobvumidza vamiririri kusangana nevatengi chero kwavanenge vari kuita kuti rutsigiro rwuve nyore uye runoshanda.
Mipiro mukushandiswa kweshumiro iyi
Iyo eCommerce sevhisi nzira inosiyana zvishoma kubva pazvidhinha nedhaka marongero. Sezvo vamiririri vanogona kungofona kana kutaura, zvakafanira kufungidzira zvipingamupinyi zvinozowanikwa nevashandisi panguva yekutenga.
Izvo zvinoda kuti iwe ugare uchiwana mhinduro yemutengi uye woiongorora kune akajairwa marwadzo emushandisi. Ukangonzwisisa izvi zvakasiyana, iwe unogona kuisa yekuzvishandira-yega uye neanoshanda maficha anotungamira vashanyi kuburikidza nerwendo rwevatengi.
Kana iwe uri kutsvaga kuvandudza sevhisi muchitoro chako chepamhepo, tarisa chikamu chinotevera kuti udzidze nezve dzimwe dzakanakisa maitiro atakatora ecommerce vatengi.
Ecommerce Vatengi Sevhisi Yakanakisa Maitiro
Kupa rakanakisa basa revatengi mune e-commerce nharaunda kunogona kunetsa kune mamwe mabhizinesi. Izvi zvinodaro nekuti zvinogona kuve zvakaoma kusangana nevatengi kana usiri kutaurirana chiso nechiso. Iwo matipi mune ino chikamu anogona kukubatsira iwe kukunda izvi zvipingamupinyi uye kufadza vako vepamhepo chitoro vashanyi.
Tarisa pane yako yepakati nguva yekupindura. Mupfungwa iyi, hapana mubvunzo kuti pakupedzisira vatengi vanonakidzwa nekutenga pamhepo nekuti zvinoshanda uye zviri nyore. Ivo vanogona nyore kuenzanisa zvigadzirwa zvemitengo uye kuodha zvinhu chaipo pamusuwo pavo. Nekudaro, kana vatengi vaine mibvunzo, vanotarisira kuti ipindurwe zvisingaite. Ivo havadi kumirira mhinduro kana vauya kune yako saiti kuti vatenge nekukurumidza.
Ichi chikonzero nei zvakakosha kuti utarise pane avhareji mhinduro nguva kana uchishanda neecommerce vatengi. Kana vashanyi vachisvika, reps inofanira kupindura mumasekondi. Zvishandiso senge live chat uye chat bots zvinogona kuvandudza yako yepakati nguva yekupindura uye kugadzirisa nzira yekutsigira yevashandisi vako. Nekuderedza iyo nguva inotora kuwana mhinduro, vatengi havawanzo kukanganiswa uye kutsauka kure newebsite yako.
Shandisa pasocial media kune vatengi
Nekumhanyisa uye nekugona chinangwa chedu chikuru, vezvenhau venhau vanova chinhu chakakosha senzira yekushandira vatengi. Vatengi vanogona kushandisa vezvenhau kutaurira matambudziko kana kubvunza mibvunzo, nekukurumidza kuzivisa yako yebasa timu.
Ipapo vako reps vanogona kugadzirisa nyaya uye kuwiriranazve uye kugadzirisa vese vako vatengi kamwechete. Panzvimbo pekungobvunza mibvunzo pamusoro pechikamu chimwe chete chekutaurirana, chiitiko ichi chiri kwese kwese chinoita kuti zvive nyore kune vatengi vepamhepo kusangana nekambani yako yebasa revatengi.
Ipa inotsigira vatengi.
Kana vatengi vatarisa webhusaiti yako, vanogona kunge vasingazive rutsigiro rwako uye maficha ebasa. Vanogona kunge vaine mibvunzo, asi havana zano rekuenda kuti vabvunze. Kana ivo vanogona kufunga kuti ibasa rakawandisa kubata rutsigiro uye kuenderera kumakwikwi. Kunyangwe kana yako saiti inopa maSevhisi maficha, zvakakosha kuti ugone kugovana navo nevatengi vako base.
Iwe unogona kuitisa inoshanda projekiti yevatengi nekugadzira maCMA pane webhusaiti yako. Ita kuti zvive pachena apo vashandisi vanogona kuendesa yavo yekubvunza mibvunzo uye nekupa inowanzo bvunzwa mibvunzo nezve izvo zvavanogona kutarisira kubva kune rako rebasa timu. Kana iwe uine yekurarama yekutaura, gadzira pop-up iyo inokwezva mushanyi kutarisisa kune yekutaurirana widget. Izvi zvinokurudzira vashanyi kushandisa ako maficha ekubatsira, kugadzira mikana yekukwezva uye kufadza vatengi.
Sanganisira sarudzo dzekuzvishandira dzevatengi
Imwe nzira inoshanda yekupa mhinduro kune vatengi ndeye kushandisa yavo vatengi-yekuzvishandira maficha. Aya maturusi anoshandiswa nevatengi kutsvaga mhinduro kumatambudziko avo pasina rubatsiro rwemumiriri webasa. Kana vatengi vaine anokurumidza kana akakosha mibvunzo, izvi zvinovachengetera nguva kubva pakuvhura zviri pamutemo kubvunza.
Muenzaniso wekuzvishandira-wega hwaro hweruzivo. Tsananguro yeruzivo chikamu chewebsite yako ine masevhisi uye magwaro ekutsigira. Izvi zviwanikwa zvinokurukura zvakajairwa nevatengi zvipingamupinyi zvinosangana nevashandisi mazuva ese. Vatengi vanogona kuongorora izvi mareferensi vasati vataure neboka ravo rebasa.
Ipa mutsara wekutsigira foni
Vamwe vatengi havana moyo murefu wekutarisa sarudzo dzekutsigira online. Kumhanya uye kugona kwakakosha munzvimbo dze ecommerce uye vatengi vasiri-tech savvy havafarire kuongorora yako saiti kuti uwane mhinduro.
Kana zvichibvira, ipa ava vashandisi nhare yakanangana neboka rako rebasa nekupa rutsigiro rwefoni. Kunyangwe iwe usina call centre software kana yakasarudzwa nhare mbozha, kuva nenzira yekukurumidza yekudyidzana mhenyu kunogona kuvandudza zvinoshamisa ruzivo rwevatengi.
Tora mukana wezvishandiso zvevatengi
Kunyangwe rakakura sei bhizinesi rako, maturusi ebasa revatengi anogona kukanganisa zvakanyanya yako e-commerce webhusaiti. Zvishandiso izvi zvinoshandisa mabasa ekutsigira uye nekuwedzera bandwidth yeboka revatengi vako.
Semuenzaniso, tikiti sisitimu inokwanisa kubata uye kugovera zvinouya zvinobvunzwa nevatengi kuitira kuti reps izive chaizvo zvekushandira uye hapana makesi anofuratirwa.
Ecommerce vatengi vatengi software
Kana iwe uri kutsvaga kutora maturusi akadai aya kuwebsite yako, tarisa runyorwa pazasi rweyakanakisa ecommerce kasitoma sevhisi software.
Iyo HubSpot sevhisi nzvimbo yakanaka kune ecommerce mabhizinesi nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka, kusanganisira kusangana kwayo neShopify. Unogona kuyananisa vatengi vako vemuShopify neHubSpot CRM yako, wobva wabata vashanyi pavanotora matanho pane yako saiti.
Zvakare, Service Hub ine yemahara live chat uye chatbot maturusi. Iwe unogona nyore kuisa izvi zvinhu pawebhusaiti yako kuti upe vatengi vako rubatsiro rwekukurumidza.
Kayako inobatsira software inosanganisa chaiwo maficha e-commerce. Semuenzaniso, ine Facebook neTwitter zvishandiso zvinobatsira vamiriri vebasa kubata mibvunzo yemagariro enhau. Iko zvakare kune yakagovaniswa inbox ficha inoisa pakati zvinopinda zvikumbiro munzvimbo imwechete. Nenzira iyoyo, reps inogona nyore nyore kuteedzera kweese kusangana kwevatengi kuburikidza neyakajairika interface.
Clickdesk ndechimwe chikuva chebasa chinogona kushandiswa e-commerce. Chinhu chayo chinonyanya kuzivikanwa ndeye yavo yevhidhiyo chat chishandiso iyo inobvumira vatengi kuti vashande zvakananga nevamiriri.
Saka kana hurukuro ichiratidzika kunge isiri kuenda kupi, timu yako inogona kupinda muhurukuro yevhidhiyo kujekesa chero matambudziko ekutaurirana. Ndiwo mukana wakakura kumabhizimusi eSawaS anofanirwa kutsanangura mhinduro dzakakomba kana dzakaomarara.
Tora Kugutsikana kunotarisa chigadzirwa chayo pane pfungwa yekugadzira nharaunda yebasa. Iye anotenda kuti sarudzo dzekuzvishandira, senge maforamu enharaunda, ndiyo nzira yakanakisa yekupa vatengi mhinduro dzekukurumidza.
Uchishandisa zvimitambo zvaro zvemitambo, unogona kugadzira peji renharaunda rinokurudzira vatengi kuti vabatsirane kugadzirisa matambudziko. Kuwedzera iyi foramu nezvimwe zvako zvekutsigira maficha kunofanirwa kugadzira chiitiko chinogutsa chebasa.
Wana ine chatbot iyo inogona kupindura inosvika ku80% yemibvunzo yevatengi, ipapo ipapo. Shandisa muchina kudzidza kududzira mibvunzo wozopa vashandisi mhinduro inokodzera. Iwe unogona zvakare kuendesa ruzivo rwekutanga FAQs, snippets, uye zvinyorwa mukati mebhoti kuti uwedzere maitiro ako. Uye, sezvo bot inounganidza yakawanda data yevatengi, inovandudza nekufamba kwenguva.
Kusvika kwetekinoroji nyowani
Nekuuya kwetekinoroji yedhijitari uye shanduko yekutengesa kwemagetsi, pfungwa yekutenga yakachinja zvakanyanya maererano nevatengi vanotenga mapatani kune zvinotarisirwa nevatengi. Rutsigiro rwevatengi rwakachinjawo kubva kugero inoshanda kune omni-yemakambani chiteshi rutsigiro kuendesa yakajairika e-commerce chiitiko chebasa revatengi.
Chitoro chazvino chinotarisirwa kuona kuwedzera kwakakura kubva pa19% kusvika pa24% mumakore matatu anotevera, inotungamirwa zvakanyanya neomnichannel chitoro.
Sezvo tekinoroji iri kuramba ichichinja, saizvozvowo maitiro ebhizinesi uye nzira yekuenda-kumusika. Kana zvasvika pakushandirwa kwevatengi mazuva ano, ecommerce mabhizimusi anotarisirwa kuendesa iyo yepamusoro mhando ruzivo kana njodzi kurasikirwa nevatengi kune vanokwikwidza zvachose.
Saka iwe unofanirwa kuvaka sei yako ecommerce vatengi basa zano? Chii chinonzi e-commerce vatengi? Eya, e-commerce vatengi kana e-commerce rutsigiro rwevatengi iri nezve kupa rakakura basa revatengi ruzivo kuchitoro chako chepamhepo kana e-commerce bhizinesi.
Yese e-commerce kana bhizinesi rekutengesa, ingave diki kana hombe, inoda kuisa mari mukupa yakanakisa sevhisi sevhisi kuburikidza nemikana iyo vatengi vavo yavanoda kuburikidza nehupenyu chat, nzvimbo yekufona, kana nharaunda dzevanhu.
Kune mamwe maitiro akanakisa ekufunga mukuvaka yako eCommerce vatengi. Iko pasina kupokana kuti yakanakisa eCommerce vatengi ndeye kusangana nezvinotarisirwa nevatengi uye kuvapa WOW ruzivo. Kupa basa rakakura revatengi nebhizimusi rako reecommerce rinogona kuita zvishamiso mukuita kuti zita rako rimire kubva kumakwikwi. Ngatitaurei nezve ecommerce vatengi rutsigiro mazano aunofanirwa kuita.
Gadzira omni chiteshi zano
Kune ano mabhizimusi e-commerce, kungova neye kana mbiri nzira dzekutaurirana hakuna kukwana. Vatengi vanotarisira kuvepo kwako kuburikidza nenzira dzavanofarira senge webhusaiti, vezvenhau, email, runhare, nezvimwe.
Saka ndoita sei? Imwe nzira ndeye kutora omni chiteshi nzira. Ndeipi iyo omni chiteshi zano? Iyo omni chiteshi zano inobatanidza mapoinzi ese ekubatana nemutengi mukati mehupenyu hwekutenderera zvakafanana pasi pechikuva chimwe chete, kuvakwezva parwendo rwavo rwekutenga uye kuvapa chiitiko chinowirirana. 73% yevatengi vanoshandisa nzira dzakawanda mukati merwendo rwavo rwekutenga.
Kuti ugadzire ese-anosanganisira chiteshi nzira yevatengi yekutsigira zano, iwe unofanirwa kutarisa pazvinhu zvitatu zvakakosha kuti mutengi ave neruzivo seasina kupokana sezvinobvira.
Ziva nzvimbo dzekubatana dzinodiwa nevatengi vako
Nzwisisa rwendo rwevatengi vako uye gadzira zano rekuita navo kuburikidza neaya ekubata matinji
Endesa chiitiko chinowirirana parwendo rwevatengi vako
Nhaka yeiyo omni chiteshi ndeye kushandisa simba edhijitari chiteshi kugadzirisa uye kugadzirisa chiitiko chekutenga chevatengi nehukama hwavo nemhando. Nekodzero nzira dzechannel, iwe unogona kumisikidza yako brand yehupenyu hurefu uye kugadzikana munzvimbo ino inoshanduka.
Ipa inotsigira vatengi
83% yevatengi vanoda rubatsiro kupedzisa kutenga pamhepo. Uye 70% yekutengesa zvinoenderana nemanzwiro avanonzwa kubatwa nechiratidzo.
Uye ichokwadi chiri pachena kuti vatengi vanozomira kudzoka kubhizinesi rako kana ukavapa basa risingagutsi. Inowanzoitika kana bhizinesi rinotarisa pane inoitisa nzira. Nekudaro, basa rakanaka revatengi nderekutarisira matambudziko nekuagadzirisa asati akwira - proactive vatengi rutsigiro.
Proactive rutsigiro ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekuvandudza yako ruzivo rwevashandi. Deredza kudyidzana kwekutsigira uye kuvaka kuvimba kwevatengi kunovandudza kuchengetedza. Iko inokutendera iwe kuti usvike kune ako vatengi uye ita yako yose rwendo chiitiko chakanaka. Mabhizimusi epamhepo anoda kuteedzera mamwe marongero ekuti basa ravo riite.
Maitiro Akanakisa eProactive Ecommerce Vatengi Sevhisi:
Ita kuti vatengi vako vazive nezvematambudziko vasati vazviziva. Semuenzaniso, kunonoka kutumira, kunze kwechitoro kuzadzikiswa kweodha, kunonoka kutora, nezvimwe. Taurirana nyaya kune vatengi kana vazoziva nezvazvo vatengi vasati vazviziva uye vowedzera online.
Usambofa wakarasa mukana wevatengi vako. Gadzira otomatiki email kubvunza mutengi kana ivo vachifara nechigadzirwa kana email ivo gare gare mushure mekutenga.
Tarisa hurukuro dzako dzekudyidzana nekuti vatengi nhasi vanomhanyira kune vezvenhau kuti vataure maonero avo nezve chiitiko chebasa rako.
Ziva zvakajairika nyaya dzevatengi dzinogona kugadziriswa nyore nyore kudzikisa huwandu hwerutsigiro mafoni uye nekuvandudza kugutsikana kwevatengi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kuteedzera kwevatengi muecommerce
Christhian dorantes akadaro
Chinyorwa chakanaka chero bedzi iwe uine yakakwira-vhoriyamu ecommerce
Kuti ivo vashoma chaizvo uye kuti vashoma chete ndivo vanoziva kare midhiya yese yevatengi sevhisi.
Iko kune mumwe wake ari maSME uye ini ndinofunga kuti nekushandisa idzi chiteshi pakutanga zvinogadzira mutengo uye kudzidziswa mukushandisa maturusi izvo parizvino zvisina kukodzera. Zvakaringana kuve nehukama hwehukama uye kutaurirana kwakananga kuburikidza nezviri kana mezenger kana tsamba uye / kana tel kuti upe kutarisisa kwemunhu uye kutanga kuva nekuvimbika kuchiratidzo
Pindura kuna Christhian Dorantes
Nharembozha Kutenga muecommerce